कथा – ऊनी (भाग-१) | PaniPhoto
कथा – ऊनी (भाग-१)
लेखक:- सन्तोष आचार्य
अनि अर्कोदिनदेखी कार्यक्रको तैयारी जोडतोडको साथमा सुरु गरियो। अनि कार्यक्रमको मिति घटस्थापनाको दिन तय गरियो। कार्यक्रम सकिएको दिनदेखी १५ दिन दसैं बिदा थियो। कार्यक्रमको लागि हप्तादिन मात्रै भएकाले
प्रस्तुती कस्ले कस्ले गर्ने?
कति कति समयको प्रस्तुती राख्ने?
कार्यक्रमको पुर्ब तैयारी कता कता बसेर गर्ने?
कस्ले कस्ले के के काम गर्ने?
सबै कामकुराको ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मा मेरो थियो। अहो! कस्तो नमज्जाले फसियो भनेर सोच्दै कार्यक्रमको पुर्वतयारी गर्दै थिएँ। ब्रेकमा आकाशले भन्यो ” ओइ अब त दुई दिन मात्रै बाँकी छ।” भोलि नै फण्ड कलेक्सन गर्नुपर्छ। उ पट्टि नफर्की मैले सोधेँ। “कताबाट गर्ने नि फण्ड कलेक्सन?” फेरि उस्ले जवाफ फर्कायो ” प्रत्यक क्लासमा गएर उठाउने नि मुला” मलाई झर्को लाग्यो लेघ्रो तानेर ह्या !!! मात्रै भनेँ । आकाश अलिक च्याँठिएर भन्यो ” के ह्या नि मुला?” कलेजले दिएको रकले त कार्यक्रम लाई नै पुगनपुग हुन्छ। यत्रो कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएपछी “फोकटमा त उहि गरेमात्र हो।” हल्का घाँटी भिजाउने ब्यबस्था त गर्नुपर्यो नि ! मैले पनि नकार्न सकिँन ” घाँटी भिजाउने सबाल जो थियो।” तुरुन्तै समर्थन स्वरुप टाउको हल्लाईदिए।
नाटक समापनका लागि सन्तोष चौलागाईँ कलाकर टिमलाई धन्यबाद दिँदै स्टेज बाट बाहिरिए। मैले अर्को प्रस्तुतीको लागि उद्धघोष गर्दै गर्दा उनी हातमा कपि कलम लिई स्टेक तिर नै आउँदै गरेको देखेँ। स्टेज तिर आउँदै गरेको उनी अरु कोहि नभएर हिजो मलाई आफ्नो सुन्दरताको मोहित पार्ने उनी नै रहिछिन। उनलाई देखेर म एकाग्र भएँ । अनि अझै उनको नाम थाह पाएर भित्र भित्रै अत्यन्तै खुसी भएँ। सायद हिजो म टोलाएको थाह पाएर नै होला आकाशले उनको प्रस्तुती भन्दा पैले मलाई माईक थमाएको, मलाई आकाशले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट राम्रो काम गरेको जस्तो आभास भयो। मनमनै दङ्ग पर्दै उनको प्रस्तुतीका लागि माईक उनको हातमा दिँदै गर्दा अन्जानमै उनको हातको स्पर्श मेरो पैतालादेखी मुटु हुँदै दिमाग सम्मै सरर एउटा झन्झनाहट दौडियो। उनको हातमा माईक थमाईसकेर पुनः स्टेजको कुनामा गएर ढाड अड्याउँदै एकाग्र भएर उनलाई नै हेर्न थालेँ।
© 5200 PaniPhoto. All rights reserved.